MEGAN MISSING: ပိတ်ပင်ထားသောထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရုပ်ရှင်သည် TIKTOK အားစိတ်ဒဏ်ရာရစေခဲ့သည် - သတင်း
Megan ပျောက်နေတာကဘာလဲ? TikTok ၏ပိတ်ပင်ထားသောထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသောရုပ်ရှင်သည်ကျော်လွန်သွားသည်
Megan Is Missing လို့ခေါ်တဲ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာရုပ်ရှင်ကားဟောင်းက TikTok မှာထပ်မံဗိုင်းရပ်စ်ဝင်နေပြီးသုံးစွဲသူများကဂရပ်ဖစ်မြင်ကွင်းများတွင်စိတ်ဒဏ်ရာကျန်ခဲ့ပြီဟုပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ရုပ်ရှင်ကိုအချို့သောနိုင်ငံများတွင်ပိတ်ပင်ထားပြီး၎င်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြန့်ချိသည့်အချိန်တွင်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်သောတံဆိပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ယခုမူကား, အွန်လိုင်းအွန်လိုင်းကလူပြန်ရုပ်ရှင်ပြန်ကြည့်သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေနေကြသည်။
နေရာတကာခေါင်းစဉ်ပေါ်လာသည်ကိုမြင်ရခြင်းကလူအများကဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာနှင့်မေးခွန်းကတကယ်ဖြစ်မလားကိုမေးခွန်းထုတ်သည်။ ရုပ်ရှင်၏ဒါရိုက်တာသည် TikTok သို့ပင်ပြန်လည်ကြည့်ရှုသူများအတွက်သတိပေးသတိပေးစာတစ်စောင်ကိုတင်ခဲ့သည်။
Megan Is Missing Is the horror ရုပ်ရှင်ကဘာလဲ။
Megan Is Missing သည်ဆယ်ကျော်သက်အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းနှစ် ဦး ဖြစ်သည့် Megan Stewart (ရာခေလ Quinn) နှင့် Amy Herman (Amber Perkins) တို့၏အကြောင်းကိုပြောပြသည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည် ၁၄ နှစ်ဖြစ်ပြီးမြောက်ဟောလိဝုဒ်တွင်နေထိုင်ကြသည်။ Megan ဟာသူမအွန်လိုင်းမှာတွေ့တဲ့သူနဲ့စကားစပြောပြီးသူမပျောက်ဆုံးသွားသည်။ မေီဟာပျောက်နေတဲ့သူငယ်ချင်းကိုရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။
ဒီရုပ်ရှင်ကိုအမေရိကန်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူ Michael Goi ကရိုက်ကူးပြီးရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Megan သည်ပျောက်ဆုံးချိန် မှစ၍ သူသည် Netflix ရှိ American Horror Story နှင့် Sabrina ၏ Chilling Adventures ကဲ့သို့သောအခြားစီမံကိန်းများတွင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
Megan Is Missing သည်ဂရပ်ဖစ်ပုံအရပိတ်ပင်ခံရသည်
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၂၃ ရက်တွင်ရုပ်ရှင်နှင့်စာပေအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းရုံး၎င်း၏နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနယူးဇီလန်တွင် Megan Is Missing ကိုထိရောက်စွာတားမြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်: ဒီဗီဒီကန့်ကွက်အဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်တွင်လူငယ်များပါ ၀ င်သည့်လိင်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်များကိုဤအတိုင်းအတာနှင့်အတိုင်းအတာအထိဖော်ပြထားသည်။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝြေခင်းသည်အများပြည်သူအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
ဤအကြောင်းအရာကိုကြိုတင်သတိပေးပုံပြင်တစ်ခုတွင်တင်ပြရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းဤအင်္ဂါရပ်သည်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်သူများအားအားနည်းချက်ကိုသတိပြုမိစေနိုင်သည်ဟူသောအယူအဆကို ထပ်မံ၍ အင်တာဗျူးရိုက်ကူးထားသော်လည်း၎င်းသည်အလွန်ပြင်းထန်သည်။ prurient နှင့်ခေါင်းပုံဖြတ်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်3မိနစ် Real-time မုဒိမ်းမှုမြင်ကွင်းတစ်ခုအပါအဝင်မိန်းကလေးတစ် ဦး ရဲ့စမ်းသပ်မှု၏မျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သော relishes ။
ဒီရုပ်ရှင်ဟာအဓိကအားဖြင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့သွားပြီးဇာတ်လမ်းကမှန်တယ်လို့ထင်မြင်ချက်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်သည်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သည်၊ သို့သော်သင့်ရှေ့မှောက်၌ဖြစ်ပျက်နေပုံကိုကြည့်ရှုရန်ဖုန်းများ၊ ဝက်ဘ်ကင်မရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများမှတွေ့ရသောဗီဒီယိုများမှတစ်ဆင့်ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြသည်။ ၎င်းသည်ဖြစ်ရပ်မှန်အပေါ် အခြေခံ၍ ရောင်းချခြင်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်မိန်းကလေးများအားသူစိမ်းများအားအွန်လိုင်းနှင့်အခြားကိစ္စများနှင့်မည်သို့စကားပြောသည်ကို အခြေခံ၍ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
လူတစ် ဦး က၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေပြီးအခြားသူများကိုလည်းအလားတူမလုပ်ရန်သတိပေးသည်မှာ၎င်းသည်အနှောင့်အယှက်အရှိဆုံးဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အခြားသူများကသူတို့အိမ်မှထွက်ခွာခြင်းနှင့်သူတို့သူတို့ကစောင့်ကြည့်ဘယ်တော့မှဆန္ဒရှိဟုဆိုသည်လိုသောသူတို့ကိုကျန်ရစ်မယ့်ကပြောသည်ပါပြီ
- TheTabTikToks (@TikTab) နိုဝင်ဘာလ 17, 2020
ငါတကယ်တကယ်ကိုငယ်ငယ်တုန်းက Megan ပျောက်နေတာကိုငါကြည့်ခဲ့မိတာပဲ။ ဒီနှစ်မှာတော့အရမ်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတာကငါ့အိမ်ကိုငါမစွန့်ခွာဘဲငါ့အိမ်ကိုထွက်ခွာခွင့်လည်းမရခဲ့ဘူးလားဆိုတာကိုကြောက်လန့်နေခဲ့တာ။ pic.twitter.com/83Y4CaNvF8
- Mario (@andrea_maacias) နိုဝင်ဘာလ 15, 2020
ငါတကယ် Megan ပျောက်ဆုံးနေစောင့်ကြည့်ပြီးဆုံးငါတွေ့မြင်ဘယ်တော့မှလိုရှိ၏ pic.twitter.com/lTG4AdYzhr
- 🧚‍♀️ (@_simplymonse) နိုဝင်ဘာလ 17, 2020
ကြောင်း megan ရုပ်ရှင်ပျောက်ဆုံးနေသည်ငါ့ကိုငါ့ကို bro ဒဏ်ရာရတယ်။
- #assault v (@notvezi) နိုဝင်ဘာလ 17, 2020
ရုပ်ရှင်၏ဒါရိုက်တာ Michael Goi သည် TikTok အပေါ်အစပျိုးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်သည်ထပ်မံပျံ့နှံ့သွားသည်။ သူကရုပ်ရှင်၏ခေါင်းဆောင် Amber Perkins ထံမှကြားခဲ့ပြီးပြီ၊
သူက“ Megan Is ပျောက်နေတာကိုသူတို့မကြည့်ခင်လူတွေကိုငါပေးခဲ့တဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းသတိပေးချက်များကိုသင်တို့အားငါမပေးခဲ့ဘူး။ ၎င်းတို့မှာ - ညသန်းခေါင်ယံ၌ရုပ်ရှင်ကိုမကြည့်ပါနှင့်၊ ရုပ်ရှင်တစ်ကားတည်းကိုသာမကြည့်ပါနှင့်၊ သင်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ“ နံပါတ်တစ်နံပါတ်” ဟူသောစကားလုံးများပေါ်လာပါကရုပ်ရှင်ကိုပိတ်ရန်လေးစက္ကန့်ခန့်အချိန်ပေးရမည်။ မင်းမမြင်ချင်တဲ့အရာတွေကိုမစခင်ခင်မှာမှထွက်လာပြီဆိုပါစို့။ ဓာတ်ပုံနံပါတ် ၁ သည်ပြသထားသည့်အထူးသဖြင့်ဂရပ်ဖစ်ပုံဖြစ်သည်။
သငျသညျ megan ပျောက်နေသည်ကိုကြည့်ဖို့စဉ်းစားနေလျှင်ဤသည်ကိုစောင့်ကြည့် !!! ကိုယ့်ကိုကြည့်ရှုရန်ဆန့်ကျင်အထူးအကြံပြုလိုတယ်ဒါပေမယ့်သင်ကဒီမှာပထမ ဦး ဆုံးစောင့်ကြည့် pls ချင်လျှင် pic.twitter.com/3QJbfIO50s
- မက်မွန်ミ☆ (@warrencers) နိုဝင်ဘာလ 15, 2020
အကောင်းဆုံး TikTok ဗီဒီယိုများ၊ လမ်းကြောင်းများနှင့်မှတ်စုများအတွက် - Facebook ပေါ်ရှိ TikTok ၏ Holy Church ကိုလိုက်နာပါ။
• သူ၏ဗိုင်းရပ်စ် TikTok ကျော်ကြားမှုကတည်းက Nathan Apodaca ၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှအရာအားလုံး